Madaxweyne Xassan oo diiday isku shaandheyntii Wasiirada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xassan oo diiday isku shaandheyntii Wasiirada
MAREEG 25 October 2014 26 October 2014
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhow war ka soo saaray isku shaandheyntii uu saakay ku sameeyay Ra’iisul Wasaaraha qaar ka mid ah Golaha Wasiirada, isagoo waxba ka jiraan ku tilmaamay isku shaandheyn.
Madaxweynaha ayaa sheegay inuu u dulqaadan waayay tallaabooyinka qalafsan ee Ra’iisul Wasaaraha uu qaadayay, taasoo xilal ugu magacaabayay saraakiil, kuwa kalena uga qaaday, taasoo uu ku tilmaamay kuwo xadgudub ku ah awoodaha dowliga ah.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaaraha uusan wax wada tashi ah uusan kala sameyn isku shaandheyntan, waxaana uu faray wasiir kasta inuusan sii wato howshii lagu ogaa saameyna aanay ku yeelan warka ka soo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha oo nuqul ka mid ah soo gaaray Mareeg.com ayaa u qornaa sida tan:-
WAR KA SOO BAXAY XAFIISKA MADAXWEYNAHA JAMHUURIYADDA FEDRAALKA SOOMAALIYEED:
Sida aad ka warqabtaan waxaan mar walba ku guubaabiyaa umadda soomaaliyeed iyo madaxda dawladaba, in ay u hoggaansamaan Dastuurka Ku Meel Gaar ka ah iyo shuruucda dawliga ahba.
1. Dib U eegista iyo dhaqangelinta Dastuurka;
2. Dhisidda maamul goboleedyo federaali ah iyo
3. Dimoqraadiyeynta dalka, oo ku salaysan doorasho xor ah, Sanadka 2016.
Baarlamanka Soomaaliya oo ansixiyey hindise sharciyeedka Kaluumeysiga
Akhri: Qodobada dastuurka ee isku diray madaxweynaha iyo Raysul Wasaaraha